POCO X2 एक आधिकारिक पोस्टर मार्फत लीक भयो Androidsis
POCO X2 को डिजाईन, मूल्य, र के कुञ्जी चश्माहरू चलिरहेका छन्!
यो फेब्रुअरी 4, मिति जुन आज करिब छ दिनको बाहिर छ, नयाँ स्वतन्त्र चिनियाँ निर्माता POCO प्रस्तुत गर्दछ LITTLE X2, क्षण को सब भन्दा प्रत्याशित मोबाईल। टर्मिनलको प्रस्तुतीकरण भारतमा हुनेछ। त्यसकारण, त्यो देश यसलाई प्राप्त गर्ने पहिलो हुनेछ, यद्यपि मोबाइल अन्य क्षेत्रहरूमा विस्तार हुनेछ, अवश्य।
भर्खरका हप्ताहरूमा फोनका धेरै मुख्य गुणहरू देखा पर्‍यो, तर फिल्टरेशनद्वारा, किनकि फर्मले नयाँ सदस्यको बारेमा धेरै भन्न चाहेको छैन। यद्यपि दुई दिन अघि मात्र उनले आधिकारिक रूपमा पुष्टि गरे POCO X2 डिस्प्लेमा १२०Hz रिफ्रेस रेट हुनेछ। अहिले, नयाँ लीक भएको छ फोनको उपस्थिति र अन्य विवरणहरूसँग।
POCO X2 को लीक भएको पोस्टर निम्नानुसार छ। यो आधिकारिक प्रोवेंन्सको हो भनिन्छ, तर यो छवि विकृतिको साथ पत्ता लागेको थियो। जहाँसम्म, यो धमिलो देखिन्छ भन्ने तथ्यको बावजुद, तपाईं ह्या the्गिंग स्मार्टफोन, यसको मूल्य र यसको प्राविधिक विवरणहरूको केही विवरणहरू देख्न सक्नुहुनेछ।
POCO X2 लीक पोस्टर
डिजाइन व्यावहारिक रूपमा रेडमी K30 जस्तै हो, स्क्रिनको माथिल्लो-दायाँ कुनामा अवस्थित डबल होल सेल्फी शूटरको साथ। फिर्ता पनि माथि उल्लिखित मोबाइल जस्तै छ। केवल भिन्नता POCO लोगो पछाडि प्यानलको तल्लो किनारामा स्ट्याम्प गरिएको छ।
चश्मा र मूल्य निर्धारणको रूपमा, पोस्टरले त्यो देखाउँदछ फोन 6.67..120 इंच १२० हर्ट्जको 'रियलिटी फ्लो डिस्प्ले' को साथ आउँनेछ। यसले camera 686 मेगापिक्सेल सोनी IMX64 क्यामेरा चार क्यामेरा व्यवस्थामा पनि समावेश गर्दछ स्न्यापड्रैगन 730G चिपसेट र ,,4,500०० mAh ब्याट्री। थप रूपमा, विज्ञापनले देखाउँदछ कि //2 F एफबी पोको एक्स २ लगभग १,,6 Rs मा बेच्ने छ, जुन विनिमय दरमा करिब २ 64२ यूरो बराबर छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » हाम्रो बारेमा » POCO X2 को डिजाईन, मूल्य, र के कुञ्जी चश्माहरू चलिरहेका छन्!
POCO X2 AnTuTu मा स्न्यापड्रैगन 730G को साथ कब्जा गरिएको छ [+ वास्तविक फोटो लीक]